RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday liiska xiddigaha ay kala hortagayso caawa Kooxda Bayern Munich ee Champions League – Gool FM
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday liiska xiddigaha ay kala hortagayso caawa Kooxda Bayern Munich ee Champions League
(Barcelona) 14 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday liiska xiddigaha ay kala hortagayo Bayern Munich kulanka Champions League oo ay caawa ku soo dhoweynayaan garoonka Camp Nou.
Liiskan uu ku dhawaaqday Tababare Ronald Koeman ee xiddigaha uu kala qeyb-galayo kulanka ay kooxda reer Jarmal ku qaabilayaan garoonka Camp Nou ayaa waxaa hoggaaminaya Depay & Coutinho, halka sidoo kale uu ku jiro xiddigahan Luuk de Jong.
Philippe Coutinho ayaa dib ugu soo laabtay liiska xiddigaha Barcelona kaddib dhaawac uu ku maqnaa, waxaana uu diyaar u yahay inuu caawa ka hor tago kooxdiisii hore ee Bayern Munich.
Barcelona ayaa maanka ku haysa xusuusta kulankii ugu dambeeyay ee labada kooxood dhex maray bishii Agoosto ee 2020, markaasoo Bavaria ay 8-2 uga adkaadeen Barca kulan qeyb ka ahaa wareegga siddeed dhammaadka Champions League.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha uu Tababare Ronald Koeman caawa kala hortagayo Bayern Munich:-
Kooxda Barcelona oo weli joogtaynaysa xiisaha ay u qabto saxiixa daafac ka tirsan Manchester City
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Young Boys iyo Man United ee tartanka Champions Leagueoo la shaaciyey